CAN (Christian Artists Network). ဆိုတဲ့ ဖေ့ဘုတ်က ခရစ်ယန်စာအုပ်များအကြောင်း၊
*CAN (Christian Artists Network). ဆိုတဲ့ ဖေ့ဘုတ်က ခရစ်ယန်စာအုပ်များအကြောင်း၊ စာရေးဆရာများအကြောင်းကို တင်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဖေ့ဘုတ်မှာ တွေ့ရတဲ့ ဂျာနယ်၂ခု သိုးထိန်းသံခရစ်ယာန်ဂျာနယ် နဲ့ ကောင်းချီးမိုး ဂျာနယ်တို့ ထွက်လာကြတယ် ရေးထားပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေတော့ များပြားစွာ ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အပတ်စဉ် ဂျာနယ်မရှိသေးပေမဲ့..မကြာခင်မှာ တစ်လတစ်ကြိမ်ထုတ် ညစဉ်ခွန်အား၊ သခင့်စကား၊ မေတ္တာတမန်၊ ပုံရိပ်သစ် စတဲ့ စာစောင်များစွာ ရှိနေပါတယ်။ ၀ိညာဉ်ခွန်အား၊ နေ့စဉ်ခွန်ါအား စသဖြင့်လဲ ရှိကြပါတယ်။ အသင်းတော် နှစ်ပတ်လည် စာစောင်များလဲ ထုတ်ကြပါတယ်။
CAN အဖွဲ့ကို ကြိုဆိုပြီး တကယ့်မြန်မာခရစ်ယန် လစ်တရေးချားများ သံလျှင်ဖေသွင်နဲ့ဆရာဆိုး တို့လို ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါစေ။
Nyihtwekalay Laltanpuia Chhangte
*CAN (Christian Artists Network).
'Can' လို့ပဲ ဒီအဖွဲ့ကိုခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအဖွဲ့နာမည်ကို စာညွန့်ရေးတဲ့ဖက်မှာ အရမ်းတော်တဲ့ ဆရာမ မလွမ်းသူ(ပဲခူး)ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ကန့်ကွက်မဲမရှိဘဲ အတည်ပြုခဲ့ကြတာပါ။
*CAN ကဦးစီးပြီး ခရစ်ယာန်စာပေနှင့်အနုပညာရှင်များ၊ ဝါသနာရှင်များအားလုံး သက်ဆိုင်တဲ့ ''အနုပညာအခင်းအကျင်း''ကို ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်(M.I.T)မှာ (၂၉-၃၀၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၄) နှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
*ကဗျာရွတ်ဆိုတင်ဆက်ခြင်းမှာ ကိုဇက်၊ ထူးဝေကျော်၊ ပီမွန်သော်၊ ယောန၊ စောရွယ်လူး(ကယ်တင်ခြင်းတပ်)၊ နေမင်းအိမ်၊ ဆလိုင်းအောင်နိုင်၊ မလွမ်းသူ(ပဲခူး)၊ ဝါးဆဲ(နံ့သာကုန်း)တို့က ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
*ခရစ်ယာန်ရသစာပေများခံစားတင်ဆက်ခြင်းမှာတော့ ချစ်သောအောင်ဒင်၊ သိက္ခာတော်ရဆရာဦးမြသောင်း၊ ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေး၊ မောင်နွယ်မြင့်၊ ဆိုး၊ ပြည်ငြိမ်းအေး တို့က ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
*ခရစ်ယာန်ပန်းချီ၊ ကာတွန်းများ ခင်းကျင်းဖန်တီးခြင်းမှာ လူရှည်တောင်တန်းမိုးယဉ်သဲရာ၊ စောဂျနုံး၊ ဇိုဇမ်၊ ညီညီငယ်၊ ကိုဇက်၊ စ'အောင်သိန်း၊ ညီထွေးကလေး(သိုးသူငယ်).. စောခူရှီး၊ ခိုင်ပွီး စတဲ့အနုပညာရှင်များက ဦးဆောင်မှုပြုခဲ့ပါတယ်။
*ခရစ်ယာန်ဂီတအနုပညာ ဖန်တီးပြုစုခြင်းမှာ တင်အောင်လွင်(Exodus)ဦးဆောင်တဲ့ အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။
* ခရစ်ယာန်အငြိမ့််သဘင်ကဏ္ဍမှာတော့ လူရွှင်တော်အောင်သန်းဇော် ကဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
* ခရစ်ယာန်စာပေနှင့် မျိုးဆက်သစ်အကူးအပြောင်းကဏ္ဍမှာတော့ ကိုပီတိ(အလင်းအိမ်)၊ Jonathan's Heart၊ မနန်း၊ တီအီးပေါင်(အိပ်မက်သစ်)တို့ဦးဆောင်ပြီး ခရစ်ယာန်လူငယ်စာရေးဆရာများစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
* ခရစ်ယာန်စာဖတ်သူတို့ပဲ့တင်သံမှာတော့ မုရန်ဒွန်း၊ မီးအိမ်ငယ် စသူတို့ရဲ့ခံစားမှုများနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အခင်းအကျင်းများ။ ရှားပါးစာအုပ်များနဲ့ ခရစ်ယာန်စာအုပ်သစ်တွေ ဝေဝေဆာဆာကျင်းကျင်းပြသခဲ့ ကြပါတယ်။
ဗွီဒီယို၊ အော်ဒီယို အခွေ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနားထောင်ာနိုင်တဲ့ ခေတ်ကာလမှာ စာအုပ်ဖတ်ခြင်း နည်းပါးလာပါတယ်။ စာတိုစာပိုဒ်၊ ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုဆီ ဖတ်ပြီးခွန်အားယူနေတဲ့ ဖေ့ဘုတ်လောကမှာ အခုလို ခရစ်ယန်လစ်တရေးချား စာစောင်များကို လူငယ်၊လူကြီးများ ဖတ်ကြစေလိုပါတယ်။ ခရစ်တော်ကို နက်ရှိင်းစွာ မိတ်သဟာရဖွဲ့နည်းကတော့ သမ္မာကျမ်းစာ (မူရင်း) ကို ဖတ်ရတာ အရမ်းပျော်လာတဲ့အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကတော့ ခရစ်ယန်စာပေမှာ အမြင့်မားဆုံး စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းတော်များက စာအုပ်ပြတိုက်လို ဖြစ်နေတဲ့ စာအုပ်များလည်း အသက်ဝင်လာစေလိုပါတယ်။ တကယ်ငှားရမ်းနိုင်တဲ့ စာကြည့်တိုက် ဖြစ်လာဖို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့လည်မှာ ခရစ်ယန် နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်စာအုပ်ဆိုင်၊ နဲ့ CLC Christian Literature Center စာအုပ်ဆိုင်များကတော့ လူသိများပါတယ်။ တခြားအသင်းတော်များရဲ့ စာအုပ်ဆိုင်များကတော့ တနင်္ဂနွေ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသူများလာချိန်ပဲ ဖွင့်ပါတယ်။